China Kiwi na-emepụta na ndị na-ebu ya | Ihe nketa
Kiwi sitere na China site na obodo Zhouzhi site na ihe ngosi nke Geographical. Ọ na-akpọ Chinese Goozberị.
Kiwi bụ ụwa ama. Ọgaranya n'ọtụtụ vitamin na folic acid, carotene, calcium, lutein, amino acids, inositol nke sitere n'okike, nke a maara dị ka eze nke mkpụrụ osisi.
Ihe nketa nri ebuputala ihe karịrị mba 20 n'ihi ogo dị elu na uto pụrụ iche.
Kedu uru ndị ọ bara Mịrị Kiwi Mkpụrụ osisi?
Ihe ụtọ, kiwi na-atọ ụtọ nwere ike ọ gaghị abụ ihe bara uru maka nchekwa nchekwa ogologo oge ma ọ bụ iri nri na njem, yabụ tụlee mkpụrụ osisi kiwi a mịrị amị dị ka ihe ọzọ nwere ọtụtụ uru. Mkpụrụ osisi a nkụkọrọ mmiri dị obere na abụba, na-adịchaghị obere kalori ma na-enye ezigbo mineral na eriri. Ọ na-adịkarị elu na shuga ndị ọzọ, agbanyeghị, yabụ tinye ya n'ime atụmatụ nri gị ma ọ bụrụ na ị rie nri shuga dị ala.
Kalori na Abụba
1.8 oz. ijiri nkpuru osisi kiwi akpuru nwere kalori 180. Nke a dị ntakịrị karịa otu ọrụ nke ọhụrụ kiwi, nke nwere calorie 30. Akụkụ nke a bụ n'ihi usoro ihicha maka mkpụrụ osisi, nke na-etinye calorie na nri ndị ọzọ. Dika a na-ekpuchikarị kiwi na shuga, calorie nkpuru osisi a gụnyekwara sugar agbakwunye. N'agbanyeghị ụba calorie, ijere mkpụrụ osisi kiwi a mịrị amị bụ ezigbo nhọrọ maka nri; Osimiri Diet na-atụ aro iri 100 ka 200 calorie maka nri nri n'etiti nri. Otu ọrụ nke kiwi a mịrị amị na-agụnye 0,5 g nke abụba, obere ego nke na-eme ka mkpụrụ osisi a dehydrated bụrụ ezigbo nhọrọ maka nri ndị nwere obere abụba.
Mkpụrụ kiwi a mịrị amị bụ ezigbo nhọrọ iji bulie iron na calcium gị. Otu mkpụrụ osisi nke mkpụrụ osisi a na - enye pasent 4 nke calcium ị chọrọ kwa ụbọchị. Calcium dị na kiwi na-eme ka ọkpụkpụ na ike ya sie ike.
Nke gara aga: apụl
Osote: Agba odo
Mmiri ewiwere Kiwi
Akpịrị Kiwi Chips
Mkpụrụ Kiwi akpọnwụwo
Mmiri Kiwi Rehydrated
Mịrị Kiwi Mkpụrụ Mpekere
Nri Ezi Kiwi
Mịrị Kiwi Mpekere